Sunday January 06, 2019 - 10:11:43 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ciidamada Xarakada Al-Shabaab oo sii kordhiyay weerarada ka dhanka ah dowladda Federaalka iyo Shisheeyaha ayaa habeennadii lasoo dhaafay waxay si xiriir weeraro kala duwan uga fulinayeen magaalda caasimadda ah ee Muqdisho.
Habeenkii xalay, xoogaga Al Shabaab waxay weeraro ku qaadeen fariisimiyaal ay degmada Hodan ku leeyihiin ciidamo katirsan dwoladda Federaalka.
Weerarada oo loo adeegsaday qaraxyo xooggan waxay sababeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo gaaray ciidamadii goobta ku sugnaa..
Ciidamo ku sugnaa xeradii Asluubta degmada Hodon ayaa la kulmay weerar Bambaano loo adeegsad waxaana weerarkaas ku dhintay hal askari laba kalane dhaawacyo ayaa kasoo gaaray.
Goobjoogayaal ay soo xiganeyso Idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan ayaa xaqiijiyay iney arkayeen tiro ciidamo ah oo dhimasho iyo dhaawac noqday, kadib markii lagu weeraray qaraxyada, sidoo kale ciidamo ku sugnaa isgoyska Taleex ee isla degmada Hodon ayaa lagu tuuro Bambaano nuuca gacanta laga tuura ah waxaana jira khasaara dhaawacyo ku eg sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Ugu yaraan 3 askari oo katirsan dowladda ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraradan, sidoo kale weerar ay xoogag hubeysan ka fuliyeen xaafadda Xoosh ee degmada Dharkeynleey ayaa sababay dhimashada sarkaal sare oo katirsanaa ciidamada Melleteriga dowladda, dhammaan weeraradii xalay dhacay waxaa mas'uuliyadooda sheegatay Xarakada Al Shabaab.